မောင်တိုင်ပင် ဧ။် အတွေးပုံရိပ်များ: Industrial estate
မနေ့က Bukit Batok Industrial Estate က hawker centre မှာ ဆြာဂျီးရွှီးကဘဲကင်၊ဝက်နံကင်တွေကောင်းတယ်-- တို့ lunck သွားစားမယ်ဆိုပြီး စလုံးက သူရဲ ၄ ကောင်ကိုဖိတ်လို့သွားကြတယ်။ မောင်တိုင်ပင်အတွက်ပျင်းစရာနေ့ တစ်နေ့ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘာကြောင့် လဲ ? သက်လား ?
စင်ကာပူက Industrial Estate တွေကိုရောက်ဘူးချင်တာရယ်-- ကံကကောင်းချင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မစပ်စုမိလို့ပဲရှိရမယ်-- စလုံးသူရဲ ၅ ကောင်အနက် bro ကိုအောင်စိန်က Bedok Industrial Estate ကိုတာဝန်ယူရတဲ့ မန်နေဂျာဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတော့ ကိုအောင်စိန်ဟာ မောင်တိုင်ပင် အတွက်အရေးကြီး ဗျူးစရာ စယ်လီဘရစ်တီ တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်--ဘယ်နှယ်ဗျာ -- ရှားရှားပါးပါး ဒီလို သောက်စာရင်းရှုပ်တဲ့ စင်ကာပူ industrial estate မှာ ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့ အကြုံ ရှိနေတဲ့ သူပဲဗျာ -- ရေုးပီးရင်တော့ ဂျောင်းပေါ့ --အခုတော့ ဖူးဖူး ဖူးဖူး နဲ့ မှုတ်ထားရမဲ့ လူ-- စထှာဘာ စထှာဘာ ဗျာ--
စင်ကာပူ industrial estate တွေအကြောင်း A to Z အကုန်သိတဲ့ လူနဲ့ စကားထိုင်ပြောခွင့်ရတာ နည်းတဲ့ အခွင့်အရေးလားဗျာ--
စင်ကာပူမှာ Industrial Estate သို့မဟုတ် Business Park ပေါင်း. ၂၀ ကျော်ရှိတယ်--အရေအတွက်ကအရေးမကြီးပါဘူး--Bukit Batok industrial estate က အသစ်ဆောက်ထားတာမကြာသေးဘူး--basement အပါအဝင်အထပ်ပေါင်း ၇ ထပ်လောက်ရှိပါတယ်-- structure ကအခြားအဆောက်အဦးတွေနဲ့မတူပဲကြီးမားခိုင်ခန့်ပုံရပါတယ် -- 40 foot container တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီး ကောင်းကောင်း မောင်းတက်လို့ ရပါတယ်--သက်ဆိုင်ရာစက်ရုံယူနစ်ရှေ့ ထိမောင်းလာနိုင်ပြီး ပစ္စည်းတင်နိုင်တယ်--ချနိုင်ပါတယ်--ကိုင်တွယ်ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်--တချို့ ယူနစ်တွေကပစ္စည်းသိုလှောင်ကြပါတယ်--တချို့ ဆိုရင်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ မချက်ပြုတ်တော့ပဲ industrial estate unit မှာပဲလာချက်ပြုတ်ပြီး finished products တွေကိုဟိုတယ်ပြန်ဟာနဲ့ သူ သတ်မှတ်ချက်အသီးသီးရှိပါတယ် --ယူသွားပြီးပြင်ဆင်ဧည့်ခံကျွေးမွေးမှု လုပ်တယ် လို့ သိရပါတယ်--တချို့ လည်း COE ပြည့်သွားတဲ့ တန်ဖိုးကြီးကားတွေကပစ္စည်းတွေကိုကိုဖြုတ်ပြီး scrap လုပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်--Sin Min auto care industrial estate ဆိုရင်ကားပြင်တတဲ့ ဝပ်ရှော့တွေ အများကြီးရှိပါတယ်--ဘာလုပ်ငန်းတွေရှိရမယ်ဆိုတာ သူဟာနဲ့သူသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်----food industry တော့ တော်တော်များများရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်--
သူငယ်ချင်းကိုအောင်စိန်ကတော့ သူကုမ္ပဏီက industrial estate တစ်ခုလုံးရဲ့ engineering and management ကိုတာဝန်ယူရပြီး သူကိုအဲဒီ
Estate မှာမန်နေဂျာတာဝန်ပေးထားပါတယ်--၇ထပ်အဆောက်အဦမှာ ယူနစ်ပေါင်း၃၀၀ လောက်ရှိပါတယ်-- အဆောက်အဦရဲ့M&E လုပ်ငန်းတွေရဲ့ maintenance တွေကို sub contract စနစ်နဲ့ အချိန်မီ ပြီးစီးအောင်ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ပေးရပါတယ်--ကားတွေရပ်တာကအစအဝင်အထွက်တွေ manage လုပ်ရတာဖြစ်လို့ အင်မတန်ခေါင်းစားရတယ် လို့ ကိုအောင်စိန်ကပြောပြပါတယ်--လျှပ်စစ်မပြတ်ဖို့က ကန်ထရိုက်ယူထားတဲ့ ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူရပြီး supply တစ်ခုခု ပြတ်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းရအောင်လုပ်ပေးရပါတယ်-- သူတို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့တိုက်ရိုက်လုပ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ sub contractor တွေနဲ့ အချိန်မီဆက်သွယ်ပြီးအချိန်မီ ပြီးအောင် လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်--estate တစ်ခုမှာယူနစ်တစ်ခုဟာအကျယ်အဝန်း ဟာ ၅၀၀-၆၀၀ sq meter လောက်ရှိတတ်ပါတယ်--ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့တချို့ ဘောစိတွေကတော့ ယူနစ် ၄-၅ ခုဝယ်ထားပြီး ပြန်ငှားစားတတ်ပါတယ် -- ယူနစ်တစ်ခု ဟာအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်လောက်တန်ဖိုးရှိပြီး တတ်ဆင်မဲ့စက်ပစ္စည်းတွေ တန်ဖိုးမပါဝင် နိုင်သေးပါဘူး-- မြေနေရာရှားပါးတဲ့ စင်ကာပူ ကျွန်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီ လိုindustrial estate တွေဟာ ကျစ်လစ်ပြီးဆိပ်ကမ်းတွေနဲ့ နီးနေတာကြောင့်ချက်ချင်းတင်ပို့ နိုင်သလို packaging ပြောင်းချက်ချင်းလိုတဲ့နေရာဆီတင်ပို့နိုင်တဲ့ အခွင့်အလန်း လည်းရှိနေတာကြောင့်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံအတွက်တွက်ချေကိုက်ပါတယ်--small and medium industries အတွက်သင့်လျော်ကိုက်ညီတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်--
မောင်တိုင်ပင်ကတော့ ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးနဲ့ ကိုက်
မကိုက်ကိုချိန်ထိုးနိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါတယ် --ဘာပဲပြောပြော မြေပေါနေသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုက်ညီမှုမှရှနိုင်ပါ့မလားလို့ ယူဆနိုင်ပေမဲ့ ဒီ industrial estate ကယူနစ်တွေဟာ compact ဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ပါတယ်--နောက်တစ်ခုကစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသာမကလုပ်ငန်းစုံလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိနေပါတယ်--သို့သော်လည်း ရန်ကုန်မှာမြူနီစပယ်လုပ်ငန်းများ efficient မရှိသေးတဲ့အတွက် estate ရဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်စပ်မလုပ်ကိုင်သေးပဲတစ်ဦးတည်းသီးခြားလုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်၍ကုန်ကျစရိတ်များပြားလာနိုင်ပါတယ်--
မင်းကွာ--စက်မှုဇုန်တွေတောင်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်နိုင်သေးပဲနဲ့ စင်ကာပူပုံတူကူးချပြီးစဉ်းစားနေသေးတယ်လို့ပြောချင်ပြောနိုင်ပါတယ်--ပုံမှန် စက်မှုဇုန်ထောင်မယ်ဆိုရင် လယ်ယာမြေအမြောက်အများသိမ်းယူပြီး စက်မှုဇုန်တွေတည်ထောင်တာ ဖြစ်လို infrastructure တည်ဆောက်မှု အတွက်လည်းငွေတွေအများကြီးကုန်ကျနိုင်တာကြောင့်developer ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတောင့်တင်းမှုအပေါ်အများကြီးမူတည်ပါတယ်--industrial estate တွေကို အမှတ် ၃ လမ်းမကြီးဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ အနာဂတ်ရဲ့ မြို့ ပြစီမံကိန်းနဲ့ in line ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး စီမံကိန်းချ plan ဆွဲထားနိူင်ရင် ရေတိုကာလအတွင်းတိုးတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာကြောင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစာနိုင်ပါရန် တင်ပြလိုက်ပါတယ်--
confidence n over confidence
Facebook Notes များ
other blog like to share
social media မှ စုံစီနဖါ
ကုန်သွယ်လယ်ယာ မီးလောင်တဲ့ ည
စင်ကာပူ နဲ့ စည်း ကမ်း
စတိုရီ ၂ ပုဒ်
စီးပွားရေး နဲ့ သတင်းအချက်အလက်
ဗျူရိုကရက် နဲ့နိုင်ငံရေးသမား
ဘဏ်တွေ တိုးတက် ဖို့
ဘိုးဘိုး နှင့် မြေး
ဘိုးဘိုး နှင့် မြေး
သမီး အတွက်မွေးနေ့ လက်ဆောင်
သံဝေဂ (ပြည်သူအချစ် နှင့် ပြည်သူအမုန်း)
မြေး နှုင့် ဘိုးဘိုး
စီးပွားရေးမှာ သိပ်တော်တဲ့သူရှိသလား ?
What's in my mind!
ကောက်ရိုး ပဲစေ့ နဲ့ မီးသွေးခဲ